Ọ bụrụ na ịchọrọ imeziwanye nkà ịge ntị gị, were ọzụzụ a si n'aka Charlotte Naymark. Mgbe ị mechisịrị ma kọwaa ihe ige ntị bụ, ị ga-ahụ otu esi eji nlegharị anya jikọọ ma gbanwee maka nke ọzọ. Mgbe ahụ ị ga-amụta otu esi eji ngwa ọrụ dị n'aka gị, ọ ga-abụ oge, ịgbachi nkịtị na mmetụta uche, ị ga-ahụkwa ihe na-egbochi ịge ntị nke ọma. Ná ngwụsị nke ọzụzụ a, ị ga-enwe kaadị niile n'aka iji gee ndị na-agwa gị okwu ntị.
Mee ka ige gị ntị nke ọma Ọnwa Iri na Abụọ 12, 2020Tranquillus
GỤỌ Ihe ize ndụ nke mmụọ
gara agaChoputa MindView
-esonụNna-ukwu videoconferencing na bia
Usoro ahụike na-arụ ọrụ: kedu mgbanwe ndị dị na February 16, 2022?
Ndị nkuzi nkuzi aka ọrụ na-akwụ ụgwọ nke ọma